မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်အတွက် ဆိုလာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလှူဒါန်းခြင်း - MWCDF
Myanmar Women and Children Development Foundation
မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်အတွက် ဆိုလာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလှူဒါန်းခြင်း
mwcdf နိုဝင်ဘာ 14, 2019 နိုဝင်ဘာ 14, 2019 Myanmar, ပညာရေး
(၁၁.၁၀.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်MWCDFအသင်းရုံးချုပ်မှတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး ရုံးခန်းမ၌ မွန်ပြည်နယ်အဖွဲ့များနှင့်အတူ မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ် သော Sowers Action groupနှင့်အတူ ချောင်းဆုံမြိုနယ် အတွင်းမှ ကျေးရွာများရှိ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်ခက်ခဲသော ကျောင်း(၇)ကျောင်းကို ဆိုလာဖြင့် မီးရရှိရေး အတွက် ဆိုလာပစ္စည်းများလှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားအား ကျင်းပပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Sowers Action Group မှ ဆိုလာ ပစ္စည်း (၁၀) စုံ နှင့် ပန်ကာ (၁၀)ခု တို့နှင့် ကလေးကစားစရာ အရုပ်များအား ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ကျောင်းအုပ်ကြီးများမှ လက်ခံရယူခဲ့ ပါသည်။
COVID-19 ဆိုင်ရာစိတ်လူမှုအားပေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် Counseling Online သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်း
3 ရက် ago
MWCDF အသင်းမှ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့အကြို သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း
မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့အကြို ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်း
ဓမ္မလုံးကောင်လွယ်ကောင်းပညာဥယျာဉ် ပရဟိတ(ဘ.က)ကျောင်းဝင်းအတွင်း ဆေးဖြန်းခြင်းနှင့် Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအကြောင်း ဟောပြောခြင်း
စမတောင် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဥယျာဉ်ကျောင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း
မာဃချောင်နှင့်ကွတ်ခိုင်ချောင် (စစ်ဘေးရှောင် ပလောင်၊ နာဂ၊ ပအို့ဝ်) သီလရှင်ကျောင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း
Covid-19 ကာလအတွင်း စားရေးသောက်ရေးအခက်အခဲရှိနေသော ဓမ္မလုံးကောင်လွယ်ကောင်း ပရဟိတ ကျောင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း
MWCDFအသင်းမှ သားဖွားမီးယပ်ဆေးရုံ အမျိုးသမီးလူနာများအတွက်တန်ဖိုးသင့် အာဟာရဒါန
(၃)နှစ်မြောက်အသင်း၏ နှစ်ပတ်လည်တွင်ပြောကြားသော ဥက္ကဌ ၏ နှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကား
မှတ်တမ်းများ လ ရွေးပါ ဇွန် 2020 မတ် 2020 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2020 ဇန်နဝါရီ 2020 ဒီဇင်ဘာ 2019 နိုဝင်ဘာ 2019 အောက်တိုဘာ 2019 စက်တင်ဘာ 2019 ဩဂုတ် 2019 ဧပြီ 2019 မတ် 2019 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2019 ဒီဇင်ဘာ 2018 နိုဝင်ဘာ 2018 စက်တင်ဘာ 2018 ဩဂုတ် 2018 ဇူလိုင် 2018 ဇွန် 2018 မေ 2018 ဧပြီ 2018 မတ် 2018 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2018 ဇန်နဝါရီ 2018 ဒီဇင်ဘာ 2017 စက်တင်ဘာ 2017 ဩဂုတ် 2017 ဇူလိုင် 2017 ဇွန် 2017 မတ် 2017 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2017 ဇန်နဝါရီ 2017 ဒီဇင်ဘာ 2016 နိုဝင်ဘာ 2016 စက်တင်ဘာ 2016 ဩဂုတ် 2016 ဇွန် 2016 မေ 2016 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2016 ဇန်နဝါရီ 2016 စက်တင်ဘာ 2015
Nay Pyi Taw Head Office
No. Oak-6, Corner of Mandalay Street
andHnin Si Street,
Ph: +95- 067-417797
This website is developed by Arthur Myanmar Studio
Copyright © 2020 MWCDF. Powered by WordPress. Theme: Ample by ThemeGrill.